Milateriga Turkiga oo gudaha u galay Suuriya - BBC News Somali
Milateriga Turkiga oo gudaha u galay Suuriya
Image caption Ciidanka Turkiga waxay Idlib ka galeen Reyhanli oo ku taalla gobolka koofurta Turkiga ee Hatay.
Askarta Turkiga oo wata gaadiidka gaashaaman ayaa ka gudbay xudduudda Suuriya, waxayna Ankara sheegtay inay arrintaas qayb ka tahay hawlgal looga gol leeyahay in lagu joojiyo dagaalka Idlib.
Hadal Milaterigu soo saaray ayaa lagu sheegay in ciidanku ay samaynayaan xarun ay kala socdaan "aagga dagaalka ka caaggan" oo qayb ka ahaa heshiis dhex maray Ruushka iyo Iiraan.
Idlib badankeed waxaa gacanta ku haya Hayat Tahrir al-Sham, oo ah isbahaysi jihaad-doon ah oo gacan saar la leh Al Qaacida.
Waxay kaloo xudduud la leedahay deegaanaka Afrin ooTurkigu doonayo inuu xasiliyo.
Turkigu wuxuu taageeraa mucaaradka madaxweynaha Suuriya Bashaar Al Asad, sannadkii horena waxay taageereen duullaan ay fallaagadu ku qaadeen kooxda la magac baxday dawladda islaamiga ama IS, meel u dhow xudduudda, dhinaca magaalada Xalab.
Hawlgalka waxaa kaloo looga gol-leeyahay sidii looga hortagi lahaa isbahaysiga Maraykanku taageero ee horseedka ay ka yihiin Kurdiyiinta YPG, kuwaasoo dhulna qabsanaya, kuna sii durkaya Afrin.
Ankara waxay u aragtaa YPG inay yihiin farac ka mid ah ururka Kurdiyiinta ee PKK, kaasoo u dagaallamayey muddo 30 sano ah sidii ay Kurdiyiintu uga madax banaanaan lahaayeen Turkiga.
Wakaaladda wararka ee ku hadasha afka dawladda, Anadolu, waxay sheegtay in kolonyo milateri ah ay ka gudbeen soohdinta oo ay Idlib ka galeen Reyhanli oo ku taalla gobolka koofurta Turkiga ee Hatay.
Wargayska Hurriyet wuxuu sheegay in ilaa 30 gawaarida gaashaaman ah iyo in ka badan 100 askari ay ka qayb qaadanayaan hawlgalka, ayna dhici karto in askar dheeraad ah la diro maalmaha soo socda.
Hadal uu soo saaray milateriga Turkiga ayaa lagu sheegay in askartu ay hawlahooda ka bilaabeen Idlib, ayagoo dhisay xarun dusha kala soconaysa dhaqdhaqaaqa, sida ku xusan qorshihii ay ku heshiiyeen bishii hore Ruushka iyo Iiraan ee ka dhacay caasimadda Kazakhstan ee Astana.
Seddexda quwadood wuxuu mid kasta sheegay inuu diri doono ilaa 500 oo kormeere oo la geyn doono cirifka aagga dagaalka ka caaggan, si looga hortago isku dhac dhex mara xukuumadda Suuriya iyo xoogagga fallaagada, lana ogolaado gaarsiinta gargaarka bani aadminimo, iyo in la sameeyo xaalad suurto galin karta in dadkii barakacay ay soo laabtaan.
Image caption Turkigu wuxuu doonayaa in Kurdiyiintu aysan qabsan deegaannada ay fallaagadu haystaan ee Idlib
Mid ka mid ah miliishiyooyinka Kurdiyiinta ayaa u sheegay wakaaladda AP in askarta ay degeen seddex meelood oo ku dhereran wajhad u dhaxaysa Afrin iyo Idlib.
Sarkaal ka tirsan kooxda FSA wuxuu sheegay in geynta askarta Turkiga ay "xaqiijinayso in aaggaas uu yahay mid laga ilaaliyey Ruushka iyo duqaymaha rajiimka, lana fashilin karo isku day kasta oo ay miliishiyada YPG si sharci darro ah ku qabsan karaan dhulkaas".
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa wacad ku maray inuusan u ogolaan doonin YPG inay sameeyaan "marin argagax" oo loo maro badda Mediterranean, kaasoo u baahnaanaya in Kurdiyiintu qabsadaan deegaannada buuraleyda ah ee ay haystaan mucaaradka iyo xoogagga xukuumadda.
CNN Turk ayaa ku warrantay in isku dhac uu ka dhacay baadiyaha Idlib, meel u dhow halka xudduudda laga gudbo ee Ogulpinar, laakinse ma cadda xoogagga ku lugta lahaa.